Pot Odds Calculator | ThatsLuck.com
06 / 05 / 2021 24 / 03 / 2020 di wp_136893
Pot Odds Calculator: Mee mkpebi ziri ezi mgbe niile na egwuregwu poker online!
Pot Odds Calculator bụ sọftụwia maka sistemụ Windows nke eji achọpụta ihe dị mma ma ọ bụ nke ọzọ na-akpọ nzọ nke onye iro n'oge egwuregwu ego nke Texas Hold'em poker.
Ya mere, ka anyị ghara ikwu maka asọmpi, mana maka egwuregwu ndị ahụ ebe mgbanwe ma ọ bụ ọtụtụ puku euro na-efe dabere na ọkwa nke ndị kpuru ìsì.
Maka ọdịmma anyị na-edozi obere mgbanwe, n'ihi na mmụọ nke ThatsLuck ọ bụghị ịzụ shark nke tebụl na-acha akwụkwọ ndụ, kama ọ bụ ịzụ ndị ọrụ ka ha mee nhọrọ kachasị mma mgbe niile, n'agbanyeghị egwuregwu a tụlere.
Tupu ịga n'ihu na-echeta nke ahụ ThatsLuck you ga-ahụkwa ọdịnaya zuru oke n'efu, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọgide na-emelite na mbipute denye aha na ọwa anyị na ► YouTube.
Etu ị ga-esi gbakọọ ite poker na ntanetị: iji sọftụwia
Ozugbo ibudatara ma budata zip faịlụ na desktọọpụ gị, ị ga-ebido ịmalite ịchụ nta na mmemme ahụ ga-adị njikere iji ozugbo.
Dị ka ị na-ahụ nseta ihuenyo nke Pot Odds Calculator ọ pụrụ iche ma nwee ọrụ ịgbakọ niile enyere.
Ọbụlagogo windo ahụ ka akpachara anya debe ya, nke a iji nwee ike idobe usoro ihe omume dị nso na windo tebụl egwuregwu ahụ na-enweghị mwakpo desktọọpụ ahụ nke ukwuu.
Ka anyị lee ihe atụ bara uru nke iji: ka anyị kwuo na ị nọ ọdụ na tebụl nke a na-akpọ oke micro, ma ọ bụ tebụl ndị ahụ ebe ọnụọgụ ndị ìsì dị na cents.
Ma eleghị anya, ọ ga-ada gị ihe iju, mana m na-anụkarị na micro micro bụ ugbu a ọkwa kachasị baa uru igwu egwu, n'ihi na ọkwa kachasị elu nke nkà ndị egwuregwu maka ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ dị nhata ma yabụ naanị ụlọ poker iji nweta ekele maka zaa. na ego ejiri.
Ka anyị laghachi n'ihe atụ ahụ: are na-ejide Q na J na mbadamba mgbe ntụgharị 5-10-K-2 gasịrị.
N'oge ụfọdụ n'aka, mgbe flop na uzo, ọkpụkpọ n'ihu gị nzo 10 cents na i nwere kpochapụwo abụọ kwadoro ihu Olee na aka gị, ie ọ bụrụ na a 9 ma ọ bụ A-abịa na ị na-emechi ebe na enwere ike imeri aka.
Ite ahụ bụ cents 90: ọ ziri ezi ịkpọ bekee 10 cent tupu Osimiri?
Site na ziri ezi, ana m ekwu na n'ikpeazụ, nhọrọ ahụ bara uru (EV +).
Dabere n’ihe ọ gwara anyị Pot Odds Calculator azịza ya bụ EE, n'ihi na ọ bụrụ na i lee foto nke mmemme ahụ na 8 outs (kaadị 8 nke mere ka ị mechie isi okwu ahụ, nke ahụ bụ 9s anọ na Aces anọ ahụ), ite ahụ ga-abụ opekata mpe 47 cents iji kpọọ nzọ nke 10 cents na Turn n'ihu Osimiri ma ebe ọ bụ na ite ahụ bụ cents 90, oku a bụ eziokwu.
N’ikpeazụ anyị nwere ike ikwu nke ahụ Pot Odds Calculator enwere ike iji ya mee mkpebi mgbe niile kacha mma, ma ọ bụ ịnwere ike mepee ya n'akụkụ tebụl n'oge egwuregwu ahụ, ma jiri ya naanị ma ọ bụrụ na aka dị mkpa kachasị mkpa na mkpebi siri ike ịme.
Ihe niile doro anya? Naanị ihe ị ga-amụta iji uche gbakọọ na ada bụ gị outs imechi isi; dịka ọmụmaatụ ijiri aka iji mee ụdị atọ nke outs gị bụ naanị 2, imechi mkpofu na kaadị 2 na bọọdụ ahụ bụ 9 (ọ ga-abụ 13 mwepu anyị 2 na 2 na bọọdụ), yabụ na, na net ị nwere ike mfe ịhụ ọtụtụ njikere mere tebụl ndị a data.
Nbudata Nbudata	POdds.zip - 1 MB
Categorie poker Nkeji edemede